Yini i-ExpressVPN, umhlinzeki we-VPN okumayelana nekhwalithi? - ITELE RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM Yini i-ExpressVPN, umhlinzeki we-VPN okumayelana nekhwalithi?
Yini i-ExpressVPN, umhlinzeki we-VPN okumayelana nekhwalithi?
TELES RELAY 16 November 2019
Emhlabeni omncane we-VPN, i-ExpressVPN uphawu lwentengiso emakethe. Kodwa ubani i-ExpressVPN futhi kungani lo mhlinzeki ephakathi kwabahlinzeki be-VPN abahamba phambili?
Emakethe ye-VPN, akuyona empeleni eyenza umsindo omkhulu kakhulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi nge-ExpressVPN, umhlinzeki we-VPN indlunkulu yakhe eseBrithani Islands Islands futhi ubekhona iminyaka eyi-10 edlule. I-ExpressVPN manje ibhekwa njengenye yezinsizakalo ezinamandla kakhulu ze-VPN emakethe.
Njengamanje ujabulela ukukhushulwa kokubhaliselwe kwakhe unyaka owodwa: kunoma yikuphi ukubhaliswa, kufakiwe izinyanga ezintathu zamahhala. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukuzuza ezinyangeni ze-15 zokubhalisela intengo ye-12ngaphezulu kwama-6 euros ngenyanga.
Ngale ntengo yama-6 euros ngenyanga, i-ExpressVPN inentengo ephakeme kunaleyo encintisana nabancintisana nayo. Kunesizathu salokhu: ikhwalithi yezinsizakalo zayo.
Yini ukusebenza kwe-ExpressVPN?
Isithembiso se-ExpressVPN silula: "i-VPN esebenza, ngokumane". Futhi kuwo wonke amaphuzu wokubuka, lesi sithembiso siyagcinwa. I-VPN inikeza ukufinyelela kokuqukethwe, noma ngabe ukuphi. Ukuze usebenze ngokuzungeza kwemikhawulo okunqunyelwe izinsizakalo noma amawebhusayithi, insizakalo imane isebenza kangcono kunabanye.
I-ExpressVPN ngomunye wabahlinzeki abaholayo ukuze ihambisane ne-Disney +. Amaseva ayo enzelwe futhi ukuletha i-bitrate evumela ukuthi ubuke konke okuqukethwe kwevidiyo ku-HD Egcwele. Lokhu akuhlali kunjalo ngamanye ama-VPN.
Ukusebenza okungavuthiwe kwamaseva we-ExpressVPN kungenye yamandla ekunikezelweni kwawo. Nazi izivivinyo zokugeleza okwenziwe ngokuxhuma kwe-FTTH fiber kwamahhovisi ethu, ukuxhuma kumaseva e-VPN ahlukahlukene.
Nakhu ukuhlolwa kokugeleza kokuxhumana kwendawo yethu, ku-fiber:
Ukuhlolwa kwejubane ngokuxhuma kwiseva yaseMelika, eseduzane naseNew York:
Enye etholakala eCanada:
Okokugcina kutholakala eNetherlands:
Ukusebenza kwe-ExpressVPN ngokuya ngokulanda kufakwa kumanani aphezulu womkhakha. Amaseva ayo azinzile ukusebenzisa, okulungele ukubukela i-SVOD noma ukwenza ukulandwa.
Ukuphepha okuqinile nenqubomgomo yobumfihlo
Iphuzu lokugcina elihle ngamaseva, i-ExpressVPN aygcini umkhondo wokudlula kwabasebenzisi bayo. Umgomo wayo wobumfihlo kucace bha ngalokhu. Le nkampani ishicilele nakwiwebhusayithi yayo izinyathelo azisebenzisa nsuku zonke kumaseva ayo, amakhompyutha kanye nabasebenzi ukugwema imizamo yokugenca ubugebengu. Futhi uma kwenzeka i-hack iphumelela, ibuye futhi ichaze inqubo ezosebenza ukunciphisa imiphumela.
Isu lokuphepha elibeka i-ExpressVPN endaweni yayo kumaseva alo ngaphakathi.
I-ExpressVPN nayo ine izinhlelo zokusebenza eziningi zawo wonke amadivayisi axhunyiwe okwamanje. Kusuka ku-Windows kuya ku-macOS, nge-Android, i-iOS, kepha futhi neLinux namanye ama-routers athile. Kuselula njengokukhompyutha, uhlelo lokusebenza luvumela ukuxhuma ngokuchofoza okumbalwa kumaseva we-3 000 asatshalaliswa ezindaweni ezahlukahlukene ze-160.
Izinyanga ezintathu zinikezwe nokubhaliselwe unyaka owodwa ku-ExpressVPN
Ukubhaliswa kweunyaka e-ExpressVPN kumanje ngamadola we-99,95 (ie i-90,90 euros) futhi kufaka phakathi izinyanga ezintathu ezingeziwe. Ekugcineni, qaphela ukuthi i-ExpressVPN ifaka isiqinisekiso "sanelisiwe noma sibuyiselwe imali 'izinsuku ze-30, ukuqinisekisa ikhwalithi yensiza.
Yabelana kumanethiwekhi omphakathi
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.numerama.com/tech/572210-que-vaut-expressvpn-ce-fournisseur-de-vpn-qui-mise-tout-sur-la-qualite.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=572210
I-TECH & ITELECOM
Izinhlelo zokusebenza zangaphambi kwe-Android zizoba umgodi wokuphepha
Ngendlela, kungani uShakam ebizwa ngokuthi uShakam?
Igcokama elisha 😍 Uthando 💖 I-whatsapp state video. I-GF - BF 😘 Isimo seWhatsapp u-2019 / Likhe Jo khat tujh - VIDEO
UBeyoncé uyaziqhenya ngamafomu akhe: wafunda ku-s
ENdiya: Kungani kufanele sikhathazeke ngokungalingani ukunqoba impi yokulwa nobuphofu | India News
EzokuThutha: IKhomishini yaseYurophu ithi yebo ku- "amabhethri e-Airbus" - VIDEO
ITottenham: indlela uMourinho ayishaya ngayo i-Aurier!
ABANTU & LIFESTYLE8,586
I-TECH & ITELECOM2,745